Ifektri yeshaja eyenziwe ngokwezifiso ye-IPhone, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board > Ishaja ye-IPhone
Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla kagesi, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni impilo yomkhiqizo.
Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, futhi liqinisekise kaningi ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha.
1.For the ifoni ishaja nemingcele
5V1A Ishaja yefoni ephathekayo
Amandla wokufaka ngu-220V
Amandla okukhipha yi-5V
Ukushaja okuqondile kwe-1000mA yamanje
Ishaja yefoni ephathekayo engu-5V2A
Ukushaja okuqondile kwe-2000mA yamanje
2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga okufanelekile izingxenye zokunikezwa komkhiqizo, yenza ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle ukuphazamiseka, futhi uqinisekise kaningi ukuqina kwayo. Ibhodi lesifunda lizoba ifakwe othomathikhi ibhokisi fuse, high-voltage noma short-circuit okuzenzakalelayo ukuvikela, bese ubuyisela ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha.
Isifunda uhlelo lwebhodi
Ukugcwala ngokweqile, ukulayisha ngokweqile, ukuvota ngokweqile nokuvikelwa kwesifunda okufushane
Kusha izingxenye zikagesi
Kugcwele layisha ukuguga
Ukulethwa zingakapheli izinsuku ezingama-25
1) Ishaja isidlulile 3C futhi CQC izitifiketi kazwelonke izikhungo zobungcweti
2) Sizoklama imishini ekhethekile yokuhlola umkhiqizo wethu ngamunye. Yonke into isivivinyo sesipiliyoni. Hhayi ukuhlolwa okungahleliwe. Lesi ngesinye semishini ekhiqizwayo.
Ibhodi lesifunda ligcwele ibhokisi elenziwe ngokwezifiso, ama-anti-collision andshockproof, ne-PE bag-proof package.
3) Amanani athathelwa ngokwezinga elilingana nesekethe ephrintiwe ibhodi.
Uma nje usitshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokwenza kanjalo ikunikeze ngezixazululo zedizayini, intuthuko nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama ukwenza noma yikuphi ukuma nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyazi indlela yokuklama nokukhiqiza i-elekthronikhi edinga ubuchwepheshe kanye ukungaguquguquki. Ukukhiqizwa kwethu kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, ezinganikeza wena ngekhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo. Ukusungula ubudlelwano besikhathi eside bokubambisana, obufanele ukugcina i ukuzinza kwekhwalithi yomkhiqizo nezinsizakalo zobuchwepheshe ezilandelwayo. Inkampani yethu ikakhulukazi ebandakanyeka ekwenzeni ngokwezifiso, kepha azikho ezenziwe ngomumo. Izithombe lapha ku-Intanethi wonke amasampula esi-ode ukukhiqizwa kwe- amakhasimende.
2ï¼ ‰ Umkhumbi ngokushesha uma inani lendawo lihlangabezana nezimfuneko.
3ï¼ ‰ Uma ungawazi umkhiqizo, sicela uye egumbini lethu lombukiso ukuze ubone isampula, uqinisekise futhi uhlele kabusha, ikhwalithi ilungile uku-oda, ukulethwa uma kukhona umehluko phakathi komkhiqizo futhi isampula ingakusekela ukubuya nokushintshaniswa, ikhwalithi isuselwe isampula!
8. Isingeniso ebhodini lesifunda izinsizakalo:
Ngemuva kokuthengiswa: 1. Uma kuyinkinga yekhwalithi yomkhiqizo uqobo, kuholela ekungenelisekeni. Sizosiza ikhasimende ukuxazulula inkinga ngokushesha ngangokunokwenzeka ngesikhathi esivunyelwene ngaso. 2. Uma umkhiqizo ungeke usetshenziswe ngokujwayelekile ngenxa yezici zabantu. Sichazela ikhasimende imbangela yenkinga, sikhombisa ukuthi inkinga enjalo ayihlanganisiwe iwaranti yethu, bese sinikeza ezinye izixazululo kukhasimende ngokwenkinga yekhasimende.
Amathegi ashisayo: Ishaja le-IPhone, elenziwe ngokwezifiso, iFektri, Abenzi nabahlinzeki